Redmine 2.1.0 amin'ny Ubuntu 12.04, Canaima na Debian 6 miaraka amin'ny Apache2 sy PostgreSQL | Avy amin'ny Linux
Redmine dia fitaovana fitantanana tetik'asa izay misy rafitra fanarahan-dia tranga misy fanarahan-maso bibikely. Fitaovana hafa ao anatin'izany ny kalandrie ho an'ny hetsika, ny tabilao Gantt ho an'ny fanehoana an-tsary ny fandaharam-potoanan'ny tetik'asa, wiki, forum, mpijery repository fanaraha-maso kinova, RSS, fanaraha-maso ny onjam-piasa mifototra amin'ny anjara asa, fampidirana amin'ny mailaka
Redmine Amin'ny alàlan'ny default dia mampiasa http, webrick ary MySQL ho tahiry. Mora ny manangona azy toy izao, ho hitantsika ny antony tsy misy apetaho toy izao.
Voalohany indrindra dia mametraka ny fonosana ilaina izahay:
Misintona izahay RedMine 2.1.0
Mametraka fiankinan-doha hafa izahay
Ankehitriny, hametraka ny vatosoa voalohany isika, antsoina hoe bundler, ity dia miandraikitra ny fametrahana ireo vatosoa rehetra ilain'ny tetikasanay.
Mifindra amin'ny lahatahiry misy an'i Redmine izahay
Ao anatin'ny lahatahiry Redmine dia manatanteraka ilay vatosoa bundler izahay, mba hampidinana sy hametrahana ireo vatosoa rehetra ilain'i Redmine.
Ankehitriny, amin'ny fitsapana ny fampandrosoana, dia esorinay ny fametrahana ireo adaptatera ho an'ny tahiry, satria liana izahay amin'ny fametrahana Redmine ao amin'ny Postgresql dia esorinay avy eo andalana ary manampy iray hafa tianay hofoanana, toa ny MySQL. Toy izao ny kaody:
Ampidiro ny folder config izao:
Manamboatra ny angona fifandraisana izahay
Mihazakazaka amin'ny console izahay
Mamorona ny firafitry ny tahiry izahay.
Ampidirinay ao anaty angon-drakitra izahay.
Manangana ny mpizara izahay.
Handeha isika http://localhost:3000/
Ireo torolàlana ireo dia manan-kery ho an'i Debian sy Canaima, tokony ampifanarahina ihany izy ireo.
Miakatra eto i Redmine dia miakatra, saingy miaraka amin'i Webrick ity mpizara ity dia miteraka fangatahana sy fangatahana avy amin'ny rafitra amin'ny fotoana tena miadana. Noho io antony io dia nanapa-kevitra ny hanova ny mpizara ho Apache2 izahay.
2 Fikirakirana serivisy SMTP
3 Mametraka ohatra Plugins amin'ny "Plugin People"
4 Mandidy i Ruby
Voalohany indrindra, ny dingana rehetra izay natao tetsy ambony. tsy tokony hatsipy izy ireo, fa hanitsy ny Redmine amin'ny Apache fotsiny isika.
Manome alalana amin'ny Redmine izahay, satria efa fantatrao fa miara-miasa amin'ny mpampiasa data sy vondrona www-Apache i Apache
Mamorona rohy an'ohatra izahay
Manitsy izahay: /etc/apache2/httpd.conf ary ampio ireto andalana manaraka ireto:
Hatreto dia mety izany, raha ny amiko dia nanana olana tamin'ny famindrana aho ary voavaha toy izao:
Nifindra tany amin'ilay adiresy izahay:
Manitsy ny fisie 000default izahay
Alias ​​/ redmine "/var/www/redmine-2.1.0/public/"
Safidy Indexes FollowSymLinks MultiViews
Mandà ny didy, avelao
mamela amin'ny rehetra
Azavaiko ny andalana
Alias ​​/ redmine = ny anaran'ny solonanarana dia tokony hitovy amin'ilay notendrenay RailsBaseURI ao /etc/apache2/httpd.conf
public / ”= Adiresin'ny redmine amin'ny mpizara anao
Ka rehefa mangataka localhost / redmine dia hovonoina avy amin'ny apache fa tsy avy amin'i Webrick dia jereo fa tsy mivoaka amin'ny red 3000 ny redmine
Fahombiazana rehetra entin'ny pejy ao anatin'ny segondra bitika.
Ho famenony. hijerena ireo pejy ampiasainay amin'ny mpandeha
————– Fandehanan'ny mpandeha ————–
PID VMSize anarana tsy miankina
30091 47.8 MB 9.3 MB Mpizara lohan-tsambo mpandeha
30158 283.6 MB 115.1 MB Riles: / var / www / gitorious
30613 315.6 MB 133.6 MB Riles: / trano / xxxx / org
### dingana: 3
### RSS maloto manokana: 258.02 MB
Raha ny amiko, dia nametaka redzine aho ary nanonona azy hoe "org"
Vonona hanamboatra mena, mihazakazaka apache2
Fikirakirana serivisy SMTP
Ny tombony lehibe ananan'i redmine dia ny fampandrenesana mailaka azy. Raha te hampandeha ity kalitao ity dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto isika ahafahantsika mampiasa ny kaonty mailaka ataontsika ho mailaka fampandrenesana
Ao amin'ny lahatahiry redmine no misy antsika.
Ankehitriny dia manangona ny config.yml.example toy izao izahay
Manitsy ny fisie izahay
Ankehitriny dia manamboatra ny rakitra voalaza izahay. Ity misy fanaingoana mety izay mandeha.
Ho ahy manokana, ity fampandrenesana ity dia teboka iray manandanja an'ny Redmine, satria mamela ny vondrona mpiasa hampahafantarina ny zava-mitranga, amin'ny fotoana tena izy.
famokarana: email_delivery: delivery_method :: smtp smtp_settings: enable_starttls_auto: adiresy marina: "smtp.gmail.com" seranan-tsambo: "587 'domain:" smtp.gmail.com "fanamarinana :: mpampiasa_name tsotra:" xxxx@gmail.com "tenimiafina : "xxxx"
ATTENTION Zava-dehibe ny habaka ao anaty fisie.
Mametraka ohatra Plugins amin'ny "Plugin People"
Plugins ho an'ny olona
Avatar ho an'ny mpampiasa eo an-toerana
Lisitry ny mpampiasa manerantany miaraka amin'ny ACL malefaka
Fampiharana ho an'ireo mpampiasa
Manondrana VCF Person
Lisitra fitsingerenan'ny andro nahaterahana Manaraka
Lisitry ny olona vaovao
Unzip amin'ny plugins / folder ny plugin
Mandidy i Ruby
Bonus, raha sanatria ka manana olana amin'ny vatosoa isika. "-V" = kinova
Esory ny vatosoa rehetra
Jereo ny vatosoa napetraka rehetra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Redmine 2.1.0 amin'ny Ubuntu 12.04, Canaima na Debian 6 miaraka amin'ny Apache2 sy PostgreSQL
Azafady, rehefa manoratra lahatsoratra ianao, aza asiana anarana ilay pseudo distro antsoina hoe Canaima (ary manao sorona amin'ny fanomezana anarana an'io Linux maharikoriko io aho), tsy manana zon'ny teknolojia i Chavista, tsy avelany hiaina izany ary izay fantany fotsiny dia ny hiteny. ratsy ny fandrosoana dia noforonin'izy ireo ho an'ny faritry ny mponina. Sarontava izy io.
Miarahaba, toa tsy nivoitra ny fanehoan-kevitrao, tena tsy nanaja ary tsy ekeko mihitsy izay lazainao. Ny zavatra avoakako sy ny ohatra izay havoakako manomboka eto dia mifototra amin'ny traikefa miaraka amin'i Debian sy CANAIMA.
Inona ny hevitra diso toerana ... Noforonina mba hifehezana ny vahoaka? (lol) Manasa anao aho hampidina azy io, handalina ny kaodiny loharano, ary lazao anay raha maska ​​izy io. Tiana na tsia, Canaima dia distro GNU / Linux.
Tsy milaza aminao aho fa tsy marina ianao, fa tsy toerana mety hiresahana politika XDDDDDDDDDDDDDDD
Raha mihevitra ahy ho namako ianao, fa raha tsy mitovy ny fieritreretanao ahy dia namana roa heny ianao satria miaraka mahita ny lalan'ny fahamarinana isika.
ary jereo i Frank izay miharihary fa tsy mahalala izay lazainy, mandany ny heviny ara-politika ao amin'ny forum linux avy amin'ny WINDOWS !!!, ary raha fantatrao fa ny fahasamihafan'ny mpamorona ny distro izay tsikerainao dia ilay iray amin'ireo ny malaza indrindra dia izy caprilista ary na dia misy fahasamihafana aza amin'ny fomba fijery dia manaraka ny distro.
Manaiky tanteraka an'i Frank. Ampy izay raha miteny Debian. Angamba Ubuntu. Ny ambiny dia manao dokambarotra ho an'ny distro noforonina mazava ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny fitondrana maloto sy absolutista.
Ivelan'ny kominista Castro any Venezoelà sy ireo izay manome vola any amin'ny firenen-kafa raha mbola eto isika dia mihinana tariby izay mieritreritra tsy mitovy ary tsy afaka mamoritra antsika. Ankoatr'izay, ny distana Canaima dia ratsy be satria mampatsiahy azy ireo ny Debianita isaky ny flisol na fihaonana mitovy toetra.
Tonga lafatra, raha tsy tianao ny canaima, ampiasao iray hafa toa anao, na izany aza tsy avy any CANAIMA ilay lahatsoratra, momba ny fametrahana tanteraka ny REDMINE.
franj dia hoy izy:
Mianara bebe kokoa momba ny rafitra fandidiana maimaim-poana ary raha te hampahafantatra ny tenanao dia halefako aminao ity sary ity  dia hahita zavatra tsy tianao ianao, fa efa neken'ny OS tsara indrindra manerantany fa tsy ny Windows ianao fampiasana (fambara iray ho an'ny taona 2008)
Mamaly an'i franj
Ary inona no lazainao ao amin'ny Windows 7 raha "ratsy lavitra" noho i Canaima izany?
Heveriko fa miaraka amin'io karazana fanehoan-kevitra io, ny zavatra tokana hataonao dia ny troll ary izany no kely indrindra tadiavinao eto.
Tiako ity karazana programa ity saingy mila zavatra ivelan'ny serasera aho izay tsy fantatro raha tsy azoko ny fomba fiasan'ilay programa
Rots87, misaotra tamin'ny fanehoan-kevitrao, raha miaraka ivelan'ny Internet ianao, dia tianao hikirakira azy manokana, mazava ho azy fa azo atao izany. arahabaina
Ny tiako holazaina bebe kokoa dia ity programa izay ataony ity dia manangana karazana tranonkala ho anao raha tsy diso ny fahazoako azy, mandeha izy io, raha lazaina, toy ny kaopy ihany.
ny tiako holazaina amin'ny ivelan'ny Internet ary angamba diso ny filazako azy, programa tsy miankina amin'ny mpikaroka izy io fa kosa mitovy amin'ny kalandrie na mitovy aminy
Aza adino ny resaka politika @Frank, tsy natao ho an'ity forum ity. Samy manana ny zony hampiasa teknolojia maimaimpoana isika rehetra, raha maratra ianao, sakaiza tsy ity no toerana hiresahana an'io lohahevitra io.
Lahatsoratra tsara dia tsara, toa redmine mahaliana ho an'ny endri-javatra rehetra, mampiasa Trac aho hiatrehana tranga, hadisoana ary fanaraha-maso ny kinova
Urkh Misaotra betsaka
Lahatsoratra mahaliana. Redmine dia tsy isalasalana fa fitaovana tokony ho fantatry ny mpandrindra rehetra.
Ankehitriny, toa somary sarotra amiko ny fametrahana azy, tsy ampy ve ny mametraka azy ao amin'ny toeram-pivarotana Ubuntu ohatra?
Ao amin'ny Ubuntu 13.04 no misy ny 1.4.4, amin'ity fomba ity dia manana kinova vaovao ianao.
Jose Luis Regalado dia hoy izy:
HAHAHAHAAJ ity adala nifoka sigara ity, manala an'i Canaima fa azo antoka fa mampiasa windows izy ... HAHAHAJ
Valiny tamin'i Jose Luis Regalado
Nanompo ahy tsara izy io. Misaotra anao.
Valio i Micael
Elaela aho tsy nahita lahatsoratra tsara toy izany tao amin'ity bilaogy ity. Nataonao avo dia avo ny bara.
Krel Misaotra betsaka.
Filomatika dia hoy izy:
Tsy manana anarana ny Canaima ... Ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Governemanta Venezoelà (http://canaima.softwarelibre.gob.ve/), farito ny OS:
«Canaima GNU / Linux dia tetikasa sosialy-teknolojia misokatra, namboarina tamin'ny fomba fiaraha-miasa, mifantoka amin'ny fampivoarana ny fitaovana sy ny maodely famokarana miorina amin'ny Information Technologies (IT) Tsy misy rindrambaiko sy rafi-pitantanana izay tanjon'izy ireo dia ny hiteraka tanjaka nasionaly, fampandrosoana endogenous, fizarana ary fampiroboroboana fahalalana maimaimpoana, nefa tsy very ny antony voalohany: ny fananganana firenena Venezoeliana voaomana ara-teknolojia. "
Tetikasa sosialy-teknolojia? hahaha, tena tsara ity «rindrambaiko maimaimpoana» ity. Mandehana miaraka amin'ny Governemantan'i Venezoela, miraharaha ny fahalalahana izy, eny ... Ary ahoana ny amin'ny sosiolojia? Tsy azoko ny fifandraisanao amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ...
Ny fampifandraisana ny Governemanta Venezoeliana amin'ny epithet "afaka" dia ompa iray amin'ny faharanitan-tsaina. Ankoatr'izay, tsy tokony ampiasaina ny OS novolavolain'ny governemanta.
Ary mampalahelo ny DesdeLinux niray tsikombakomba tamin'ny Governemanta Venezoeliana.
Valiny amin'ny Filomatika
Hadinoko ny tanjon'ny Canaima:
"Hiteraka fahaiza-manao nasionaly, fampandrosoana farany, fampanjariana ary fampiroboroboana fahalalana maimaimpoana, nefa tsy very ny antony voalohany: ny fananganana firenena Venezoeliana voaomana ara-teknolojia
Fampiroboroboana endogenous ... tsy ny fidiran'ny vahoaka ny loharanon-karena iraisam-pirenena ary mahita fa miaina anaty fanaintainana izy ireo
Fanararaotana sy fampiroboroboana ny fahalalana: mampifanaraka ny fananan'ny hafa izy ireo ary mivarotra azy ho azy
Fananganana firenena Venezoeliana ... Ity no mololo farany ... Firenena Venezoeliana Chavista, mazava ho azy. Tsy manome safidy amin'ny fitaovana tsy fehezin'ny fitondrana izahay, fandrao tafavoaka ny tanana ny olona ...
SADY NY DsdeLinux!
mahamenatra? … Satria ny Linux dia tranonkala iray anaovan'ny vondrom-piarahamonina marobe, ka raha tsy mizara ny tsirony ara-politika amin'ny mpamoaka lahatsoratra ianao dia tsara izany, zonao ny manana izany, saingy avy eo manisy katalaogin'ny tranonkala iray manontolo ho "mahamenatra?" Heveriko fa lavitra be izany.
Heveriko manokana fa ny distros toa an'i Canaima (Venezoela) na NOVA (Cuba) dia distros tsotra mifototra amin'ny Debian na Ubuntu fa miaraka amina 'zavatra' natolotry ny governemanta / fitondrana, io 'zavatra' io dia mety ho ambaravarana na fanatsarana tsotra fotsiny. mino izay tianao hino.
Fa ny hevitro manokana fotsiny izany.
Tahaka ny efa nolazain'izy ireo ihany koa, ity lahatsoratra ity dia tsy momba an'i Canaima fa momba an'i Redmine.
Azo antoka fa hiteny toy izany ianao amin'ny distro vita any Korea Avaratra, ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina na Cuba.
Handinika ny fomba fijery misy ny tetikasa GNU momba an'i Canaima isika (avy amin'ny https://www.gnu.org/distros/common-distros.html):
Canaima GNU / Linux dia fizarana iray nataon'ny governemanta Venezoeliana hizarana solosaina miaraka amin'ny GNU / Linux. Amin'ny ankapobeny ny planina dia mendri-piderana, fa ny lesoka nataon'i Canaima dia ny fananana rindrambaiko tsy maimaimpoana.
Ao amin'ny menio lehiben'i Canaima dia misy ny safidy "fametrahana rindrambaiko tsy andoavam-bola" hametrahana ireo mpamily tsy andoavam-bola, ao anatin'izany ireo izay tsy ilaina. Ny fizarana dia misy koa blobs ho an'ny kernel Linux ary manasa anao hametraka fampiharana tsy maimaimpoana, ao anatin'izany ny Flash Player.
Raha ny momba an'i Debian, dia izao no voalaza:
Ny Debian Social Contract dia manambara ny tanjon'ny fanaovana ny fizarana rindrambaiko maimaimpoana tanteraka, ary mitazona an-tsitrapo rindrambaiko tsy maimaimpoana ivelan'ny rafitra Debian ofisialy. Na izany aza, Debian koa dia manome tahiry fitahirizana rindrambaiko tsy andoavam-bola. Raha ny filazan'ilay tetikasa dia "tsy ao anatin'ny rafitry ny Debian" ity rindrambaiko ity, fa ny tahiry dia ampiantranoina amin'ny ankamaroan'ny mpizara lohan'ilay tetikasa, ary ireo mpampiasa dia afaka mahita haingana izay rindrambaiko azo alaina amin'ny alàlan'ny fizahana ny angona debian amin'ny Internet.
Izy io koa dia manana repository iray hafa antsoina hoe "contrib" izay maimaim-poana ny fonosany, saingy misy ny sasany amin'izy ireo mba hametrahana programa manana izay zaraina misaraka. Tsy misaraka amin'ny "main", fantsona fizarana lehibe an'i Debian ihany koa io.
Ny kinova Debian teo aloha dia nahitana takamoa tsy misy maimaimpoana miaraka amin'ny kernel Linux. Tamin'ny famoahana ny Debian 6.0 ("presse") tamin'ny volana febrily 2011, ireo fonosana mimari-droa ireo dia nesorina tamin'ny fizarana lehibe ary napetraka tao amin'ny fitoeram-bokin'ny rindrambaiko tsy maimaim-poana. Na izany aza, mbola misy ny ampahany amin'ny olana: ny installer amin'ny tranga sasany dia mamporisika ireo fisie firmware tsy maimaimpoana ireo ho an'ny peripheraly an'ilay masinina.
Objectivity, tompokolahy sy tompokovavy. Objectivity.
Tsy misy olona tsia, avy any Korea Avaratra dia tsy hitaraina aho; fantatsika rehetra fa paradisan'ny fahalalahan'ny tsirairay izy io. Hany ka nanangana ny Aterineto manokana ny governemantan'izy ireo, afaka sy tsy miankina amin'izao tontolo izao mba hahatsapan'ny rehetra milamina.
Fa i Shina no firenena kapitalista lehibe indrindra manerantany ... Sa Repoblika Entim-bahoaka ...? Oay, ny ideolojia dia tsy toy ny taloha intsony, sa tsy izany?
Ary ny momba an'i Kiobà dia teny fampaherezana tsara ho azy ireo ihany. Indrindra fa hijanona ao amin'ny Wiily Toledo malaza anay izy ireo. Inona koa, misaotra anao amin'ny fony manontolo i Espana iray manontolo. Mazava ho azy fa mandeha amin'ny visa "teknisiana vahiny" izy izay honenany ao ho Andriamanitra, azafady, tiako hovonoina toa ny an'ny antoko (avia, ho an'ny sarambabem-bahoaka).
Ary avelako eo ankilany ny tantara mavokely, heveriko fa izany no ho fanamarihako farany momba ny zava-boahary. Hifikitra amin'ny Linux aho izay manome valisoa bebe kokoa.
Mifanaraka amin'ny governemanta Venezoeliana? … TPT!!!
Tsy hizara ny firehan-kevitro politika eto aho satria tsy tanjon'ity lohahevitra ity, afaka mifandray amiko amin'ny mailaka ianao raha irinao: kzkggaara (at) desdelinux (dot) net
Na izany na tsy izany, angamba tsy nahazo tanana tamin'ny zavatra mahamenatra sy ny fampifanarahana ilay zavatra ... Ary tsy tao an-tsaiko koa ny hanafintohina ny ekipan'ny DesdeLinux. Indraindray entin'ny tazo ny iray ...
Mbola mitovy ny eritreritro momba an'i Canaima sy ny dikan'izany rehetra izany; Io dia ho tena faly amin'ny "bandage" aho araka ny lazain'ny olona etsy ambany :).
Tsy resaka politika izany fa momba ny tsirairay sy ny fahalalahana. Ary raha eo amin'ny sisin'ny hareza foana ny fahalalahana manerana an'izao tontolo izao, dia tsy tiako ny milaza aminao hoe aiza no misy azy ireo any amin'ny firenena sasany ... sady tsy misy no tsy antenaina ...
Toa tsy dia misy dikany i Canaima. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. Izy io dia fitaovana noforonin'i sy ho an'ny fifehezana.
Te hanana olona hilaza amiko aho hoe inona ny tombony sy / na ny fitaovana ary / na ny fampiasa Canaima izay tsy manana distro hafa sarobidy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Satria izany no fanontaniana, maninona no mamorona distro governemanta?
Wow, misaotra betsaka noho ny fanivanana ny hevitro roa teo aloha momba an'i Canaima sy ny governemanta Venezoeliana. Hitako ny momba an'ity tranonkala ity. Heveriko fa tsy haharitra firy ity fanehoan-kevitra ity ...
Edge econ dia manaja ity famoahana ity, tsy resaka canaima na momba ny governemanta Venezoeliana, fa ny fametrahana redmine, ao amin'ireo fizarana 3 voalaza, raha ny marina dia TSY io no fantsona mety hiadian-kevitra momba ny firenena «X» na momba ny «X »Fizarana, fa amin'ny REDMINE. arahabaina
Filo amin'ny fanajana feno. Tsy ity no fantsona hiadian-kevitra momba ny governemanta canaima na "X". Raha ny marina ny lahatsoratra dia manazava ny fametrahana ny redmine, amin'ireo fizarana 3 voalaza etsy ambony.
Ry namako, mpandinika elatra ankavia ihany koa aho amin'ny tranga sasany, fa raha tsy te-hanao fifanakalozan-kevitra amin'ny olona ankavanana ianao noho ny hadalana toa izao dia tokony hanova ny mombamomba anao ianao ary avelao ilay matihanina irery ihany.
PS: Mampiasa canaima indraindray ihany koa aho ary toa zavatra tsara indrindra sisa tavela ho ahy ny Maty, na dia eo aza ny fomba fanomezako lanja ny diso, tsy dia misy fanohanana firy avy amin'ny vondrom-piarahamonina Linuz Venezoela sy ny ekipa miasa maro kokoa izy io manatsara.
Amin'ireo lahatsoratra mahafinaritra hafa rehetra dia manantena aho fa hanohy hamaky anao. Fiarahabana avy any Maracaibo!
Misaotra betsaka noho ny hevitrao, manome lanja be. Miarahaba.
Eny, ho sisa tavela amin'ny faniriana ianao satria eto ny Venezoeliana dia manana ny haitao amin'ny zavatra roa, na mirehareha manana fitaovana vaovao (na dia tsy fantany akory aza izay fiasana ananany) na mba hahazoana vola mora, ny an'ny izahay izay tia ny teknolojia hamatsy vola dia isaina izahay ary tsy manana loharanon-karena hianarana sy hampivoarana (ny raharahako), ary teo amin'ny varavarankely no nanaovako ny hevitra avy amin'ny cyber (ho an'ireo izay nifanatrika), hoy aho tao amin'ny YouTube ary Eto no ilazako azy eto, ny Chavistas sy izay rehetra havia dia mamorona zava-misy tsy misy, ary te hamadika ny lainga noforonina ho lasa zava-misy, amin'ny teny hafa dia tsy adala izy ireo fa Fariseo (am-panajana).
Marina, tsy fantsona hiresaka politika izany. Mazava ho azy fa politika i Canaima ...
Na izany aza, ary tsy misy fikasana hitohizan'ny adihevitra dia milaza ianao fa manazava ny fametrahana redmine, amin'ireo fizarana 3 voalaza etsy ambony: Ubuntu, Canaima ary Debian.
Ny soratra dia mivaky hoe "Ao amin'ny Ubuntu:", amin'ny Debian: "... fa na aiza na aiza dia mivaky hoe" Ao Canaima: ". Izany hoe, tsy nila nantsoina hoe Canaima tamin'ny lohatenin'ilay paositra. Tsy nanome anarana distrio jeneraly hafa be mpahalala iraisam-pirenena sy malaza toa an'i Mint, ohatra, ianao.
Ary eo no alehako. Mpampiasa rindrambaiko maimaimpoana aho amin'ny zavatra rehetra atolotry ny teny hoe "afaka". Ary tsy miady hevitra, ny manandrana mamily distro eo an-toerana toa an'i Canaima dia mifanohitra amin'ny fampiasana ny fahafahako.
Miarahaba anao Filo. Nivadika aho, mametraka redmine amin'ny ubuntu, debian ary canaima aho. Ary raha hametraka redmine amin'ny canaima dia mila manaraka ny dingana amin'ny debian mode fotsiny ianao, mieritreritra aho fa tokony nanazava izany etsy ambony, nieritreritra aho fa angamba niharihary izany satria ny canaima dia nihataka tamin'ny debian, satria ny manaraka dia hanazava kokoa izany. Misaotra anao
Mitovy ny eritreritro. Raha hita fa ho an'ny Canaima pseudo linux dia ampiasaina ny dingana DEBIAN (izay iavahany amin'ny fotokevitra) dia TENA TSY MISY FAHAROA ny mampiditra azy ao amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra. Ny fametrahana azy dia tsy inona fa ny fanandramana misarona ny dokambarotra an'io zavatra io. Ahoana no hialanao amin'izany? Ary apetraho amin'ny lohateny hoe ny distros izay tena manadanja ary angamba amin'ny andalana iray amin'ilay lahatsoratra dia voalaza fa ho an'ny Canaima dia torolàlana mitovy ihany no ampiasaina amin'ny DEBIAN, araka ny fisehoany. Fa ny fametrahana izany amin'ny lohateny dia mandrangitra tsy misy antony. Tsy mila politika izy ireo? Aza omena anarana ny distro izay misy fironana politika. Mora izany!
Toa tsy ilaina amiko izany satria ny FITSARANA sy ny valiny dia tao: DEBIAN, CANAIMA ary UBUNTU. Tena pod no, amin'ny teny canaima fotsiny, distro hamahana sy hamonjy olona an-tapitrisany amin'ny firenena…. mazava raha nomena anarana i gnuLinEx azo antoka fa tsara daholo. fa satria «canaima» ary lazaiko aminao mazava tsara ary manodinkodina aho, manana ARRECHERA izy ireo noho ny fananana fehiloha HATE eo imason'izy ireo, avy hatrany dia manafika ity karazana fanehoan-kevitra ity ... ary tsy inona izany fa vitsy aho lahatsoratra fandaharana miaraka amin'i CANAIMA sy ny PUBLICARE.
Raha ny marina dia tsy tonga teto izy ireo mba hampiroborobo, hanao doka, tonga miaraka amin'ny FACTS sy ny valiny tsotra fotsiny izy ireo, ny zavatra efa HITA sy ny zavatra manan-danja indrindra zaraina.
Ry lehilahy Fenriz, efa teo amin'ny sary ofisialy ianao;). Tsy manana fankahalana na amin'iza na amin'iza aho ary tsy mitafy fehy fankahalana ... Tsy misy na inona na inona mety ho lavitra ny fahamarinana.
Mino marina aho fa io firenena io dia ho nahangona vola be kokoa raha toa ka nampihatra distro efa misy fa tsy "manamboatra" ny azy tsy misy fandraisana anjara lehibe noho ny fanovana ny anarany ... Canaima, izay, rehefa mamaky ao amin'ny tranokala fampidinana azy ianao, «Izay tanjon'izy ireo dia ny hamokatra fahaiza-manao nasionaly (sic), fampandrosoana farany (sic), fizarana (sic) ary fampiroboroboana fahalalana malalaka». Noheveriko fa distro gnuLinux izy io, saingy tsia ... Mampatahotra izany.
Tsy izaho no hilaza aminao izay tokony na tokony hamoaka, satria tsy hita izany. Eny, izaho no hanapa-kevitra momba izay tiako na tsy tiako hovakina, mazava ho azy.
Ary izany no olana misy dikany ara-politika amin'ny tontolo heverina ho "afaka": amin'ny farany ianao dia mety hitehaka anao ihany ny akolanao.
Fenriz, tsy nasiana sivana ity bilaogy ity ary tsy tokony hosivanina na oviana na oviana, zavatra ratsy kokoa no nolazaina ary navela handalo izy ireo, hoy i nano indray mandeha, raha te hanafika olona iray ianao dia afaka manao izany koa.
pandev92 Misaotra betsaka amin'ny hevitrao, efa miomana aho amin'izay.
Fenriz, manohana ny hevitra aho fa ilaina ny manome anarana canaima, mba ho hitan'ny mpampiasa maro azy ity ho toy ny referansa ity lahatsoratra ity / ilaina farafahakeliny izany ho an'ny tanjona fanoratana.
Azo antoka fa tsy hahatakatra ireo ao amin'ny tarika. Miarahaba.
Rehefa miresaka momba ny bandy ianao dia miresaka ny tenanao satria izay manana bandy dia ianao, ajanony ny mijery fitaratra fa anao ilay fehy.
Ry Fenriz malala, tsy maintsy miaiky aho fa efa namaha olana iray izay nanafana ny lohako kely ianao. Efa manana ny redmine amin'ny apache aho ary haingana, satria ao amin'ilay boky torolalana dia somary miadana izy.
Misaotra betsaka, manome tsoratadidy ny bilaogy aho.